Archive du 20170214
Aferana Boaderozy Ramatoa manampahefana no atidoha ?
Ny komandy ambonin�ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Ramiandrisoa Jean de dieu sy ny tale jeneralin�ny polisim-pirenena Joachim Rajaobelison no mitarika ny famotorana sy fanadihadiana momba ireo bolabolana boaderozy 341 nentin�ny sambo Lumina ka tratra tany amin�ny manakaiky ny Cap Masoala.
Rajoelina sy Rajaonarimampianina Ho raikitra ny valifaty ?
Manomboka miteny sy mamaly ny HVM i Andry Rajoelina ankehitriny, ary toa milaza an-kolaka fa vonon-kiady sy tsy hanaiky lembenana intsony manoloana ny enjikenjika isan-karazany mahazo azy sy ny ekipany.
Antoko TIM Ambohimangakely Nanatanteraka ny fifampiharahabana ny taona vaovao koa
Nifampiarahaba noho ny fahatrarana ny taona vaovao ny antoko Tiako i Madagasikara ao amin�ny kaominina Ambohimangakely distrikan�Avaradrano ny sabotsy 11 febroary lasa teo.
Tim Boriborintany faha-5 sy ny fifidianana amin�ny 2018 Ho lohalarana amin�ny fampandaniana ny Filoha Ravalomanana
Naseho ampahibemaso, tao anatin�ny lanonana fifampiarahaban�ny antoko TIM 5� teny amin�ny kianja maitson�Analamahitsy ny sabotsy lasa teo, ireo mpikambana Distim vaovaon�ny Boriborintany faha-5 eto Iarivo notarihan�ny filohany, Ramasitera Ralph.
Hajo Andrianainarivelo Hitarika vahoaka hidina an-dalambe ?
Mangataka ny fanjakana HVM hanome daty mazava amin�ny hamaliana ny fangatahan�ny Antoko Malagasy Miara-Miainga haka ny toeran�ny mpanohitra eny anivon�ny antenimiera i Hajo Andrianainarivelo, mpitarika ny antoko, omaly.
Mpanao politika Malagasy Tsy vonon-kihavana mihitsy
Nangingina indray ny resaka fampihavanam-pirenena amin�izao fotoana.
Olom-boafidy Mila manova toetsaina sy manaja lal�na
Fanenjehana tsy mitombina ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoakan�i Madagasikara ao amin�ny boriborintany faha-5 Raholdina Naivo milaza ny fampidiran�ny ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana politika ny fampiasana ny tetibolan�ny CLD
Aza mifanabado !
Manao ahoana ry Jean a ! Tehaka mirefodrefotra aloha fa mba somary nihena kely indray ny haizim-pito teto Iarivo tato anatin�ny andro vitsy e !
Fampiasam-bolan�ny vahiny Fehezin�ny Aziatika ny 57,5%
Ny firenena Aziatika no nitana ny 57,5%-n'ny fampiasam-bola vahiny mivantana teto amintsika ho an'ny taona 2016, ka lohalaharana tamin'izany ny firenena sinoa izay nitana ny 29%, araka ny tatitra nataon'ny Economic Board of Madagascar (EDBM).
PNUD eto Madagasikara Iharan�ny fisolokiana
Mampahafantatra ny avy eo anivon�ny sampandraharahan�ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana na ny PNUD fa misy olona
Soanierana - Arivonimamo Lalana mirefy 1km hatao rarivato
Rehefa avy nitety ireo kaominina miisa 22 mandrafitra ny distrikan�Arivonimamo ny solombavambahoaka Rakotomanjato Rodin, nitondra ny anjara birikiny tamin�ny fanarenana sy fametrahana fotodrafitrasa samihafa ilain�ny mponina dia niditra indray amin�ny asa fampandrosoana eo anivon�ny kaominina ambonivohitra miainga avy amin�ny filan�ny mponina
Voafonja eto Madagasikara 250 Ar isan�andro isan�olona no anjara sakafony
Efa ela ny nahenoana fa mandray fepetra ny mpitondra fanjakana. Ny zava-misy iainana eto amin�ny firenena hatramin�izao anefa dia miha very fanahy mbola velona ny mpiray tanindrazana.
Mpilatsaka an-tsitrapo Hikarakara fifaninanana
Asa mila finiavana ny fanaovana ny asan�ireo mpilatsaka an-tsitrapo sady tsy handraisan-karama.
Fokontany Anosizato Atsinanana Ii Nampidirina am-ponja vonjimaika ny filohany teo aloha
Nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny sabotsy teo, araka ny vaovao azo, ny filohan�ny fokontany Anosizato Atsinanana II teo aloha,
Fepetra mitondra mankaiza ?